galmudugnews.com » Darawallada Gadiidka Xamuulka ah oo joojiyay Shaqadooda, Sh/hoose
Home » WARARKA » Darawallada Gadiidka Xamuulka ah oo joojiyay Shaqadooda, Sh/hoose Darawallada Gadiidka Xamuulka ah oo joojiyay Shaqadooda, Sh/hoose galmudug on
Oct 15th, 2012 //
No Comment Views 16183Shaqo joojintaani oo ay sameeyeen Darawallada Gaadiidleyda ah ee ka shaqeeye gobolka Sh/hoose iyo Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka dambeysay kaddib markii sida ay shegeen Darawalladaasi lacago farabadan looga qaado Jidgooyooyin yaalla Muqdisho iyo Sh/hoose.
Mid ka mid ah Darawalladaasi oo lasoo xiriiray Idaacadda Shabelle ayaa waxa uu sheegay in lacago farabadan looga qaado deegaannada gobolka Sh/hoose gaar ahaan kuwii ay dhawaan la wareegeen Ciidamada Dowladda, isagoo xusay in taasi ay ku kaliftay inay joojiyaan gabi ahaan shaqadii ay hayeen, maadaama aysan u dul qaadan karin lacagahaasi.
“ Cid kuu naxaysa ma jirto, Isbaarada ugu yar waxaa ku dhiibnaa 15-Milyan oo Shilinka Soomaaliga ah, maxaan shaqeynay marka, haddii aanu nahay darawallada Gaadiidka Xamuulka ah, waxaan nagu soo dhow inaan xirano Tuutaha oo aan iska dhicino” sidaasi waxa yiri mid ka mid ah Darawalladaasi.
Sidoo kale Darawalkaani ayaa waxa uu Madaxda ugu sareysa Dowladda Soomaaliya iyo Waxgaradka Soomaaliyeed uu ka dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto dhibatada kusoo korortay degaannada gobolka Sh/hoose oo ay Isbaarooyin badan soo dhigteen Kooxo ku labisan dareeska ciidamada Dowladda.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21013 hitsContact US - 19641 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15737 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15127 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13936 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13875 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13818 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13385 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11772 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11745 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11725 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11523 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11504 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11357 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11168 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11142 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11053 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11041 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10740 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10352 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10265 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10195 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10010 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9933 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9777 hits Home About